Kismaayo News » FIIDSOOH: Carab isuma roona, Soomaalidana uma roonna!
FIIDSOOH: Carab isuma roona, Soomaalidana uma roonna!
Kn: Dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay iyo xasilooni darida amni ama siyaasadeed ee wali ka taagan, waxaa doorka ugu muhiimsan ka ciyaaray walina ku lug leh dalal Carbeed oo magac walaalnimo inagu hoday.
Hogaamiyeyaasha dalal kaasi Carbeed ee Soomaaliya ku hubsaday god aakhiro waxaa kow ka ahaa hogaamiyihii hore ee dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax oo maalin ka hor ay kooxaha Xuutiyiintu ku khaarajiyeen magaalada Sanca. Cali oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee hogaamiye u noqda isku darsankii Sanca iyo Cadan ayaa burburkii Soomaaliya kamid ahaa raggii jid iyo jaho u diiday in Soomaalidu mar kale isu timaado. Isku hubaynta hogaamiye kooxeedyada, kala gaynta qabaa’illada ayuu door muhiim ah ka ciyaaray asagoo fulinaaya dano dalal kale, waxaana dalkiisa uu ku qabtay shirar badan oo lagu sheegay dib u heshiisiin balse dadka xog ogaal ka ah ay ku sheegaan shirar kala gayn iyo sii kala fogayn.
Madaxeynihii horee Masar, Xusni Mubaarak iyo Mucamar Al Qadaafigii Liibiya ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray burburkii Soomaaliya iyo jaahwareerkii ka danbeeyay. Nasiib darro, hogaamiyeyaasha Carbeed Soomaalidana uma roonayn iyana isuma roonaan. Tusaale, Cali wuxuu qayb ka ahaa gulufkii looga takhalusay hogaamiyihii Ciraaq, Sadaam Xuseen, wuxuu sidoo kale qayb libaax ka qaatay burburka ku dhacay dal kiisa Yemen, asagoo la saftay xoogagga Xuutiyiinta ee mucaaradka ku noqday dawladda Haadi ee dalalka Khaliijku dabada ka riixayaan. Waa tii la yiri “dawaco meeshay macal uga baratay ayay macaluul ugu bakhtidaaye”, Cali asagoo ku sugan Xuutiyiinta dhex dooda, balse aan haysan awood uu isaga difaaco ayuu iclaamiyay inuu ku biiray xulufada Khaliijka, kadibna mowdka ayaa ka adeegay oo inta ay nolosha ku qabteen ayay madaxa ka toogteen sidii Qadaafi.
In kastoo Qadaafi uusan Soomaalida u qaban shirar badan, hadana wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay ee hubeeya mucaaradka dawladdii dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan SSDF iyo SNM oo ka danbaysay. Burburkii kadibna wuxuu kooxihii is hayay dhinac kasta siinayay hub, saanad iyo lacag ay ku sii wadaan dagaalka dhex dooda ah. Xusni Mubaarak oo haatan noloshiisu ay ku jirto carcaraaf ayaa sidoo kale kamid ahaa hogaamiyeyaasha Carbeed ee Soomaalida lug-gooyay. Walow Yemen iyo Liibiya uu daadku qaaday oo khatar danbe aynu ku ahayn Soomaaliya, hadana dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya dibindaabyada iyo hagardaamooyinka ay wali Soomaaliya la daba taaganyihiin dalalka Sucuudiga, Imaraadka, Kuweit, Qadar iyo Masar. Waxaa cajiib ah in hogaamiyeyaashii iska dhaxlay talada dalalkan ay isku mawqif ka ahaayeen minjo xaabinta lagu haayo umadda Soomaaliyeed ayadoo uusan jirin hal mid oo Soomaalida uga jixinjix roon kii ka horeeyay.
Haba ina dagaane, haday ayaga laftoodu isxaan isu hayaan ayaan bay u ahaan lahayd. Lubnaan, Ciraaq, Siiriya, Yemen iyo Liibiya ayay daadka raaciyeen ayaguna jidkii bay hayaan. Carabi waxay i xusuusisay gabay Soomaaliyeed oo ahaa “anigana idila, idinna way dabagalaysaane. Aqal labadii daah baan nahoo, kala danbayn mayno”. Carabtu Soomaalida haba ku tuntaane, hadii ay inaga danbeyn lahaayeen maxaa dhici lahaa, mid mid bay u soo hoobanayaan. Masar iyo Sucuudigu qarka ayay u saaranyihiin inuu daadku qaado. Qolyaha yaryar ee Soomaalida looga caal waayay inay dhibka kadaystaan ee ay kamid yihiin Imaaraadka iyo Qadar, wacdee ka hari maayaane way la hooban.
Dalalka gobolka ee doorka ku lahaa burburka Soomaaliyana, walina lug ku leh xasilooni la’aanta waxaa kamid ah, Itoobiya, Djibouti, Eritrea, Kenya iyo Uganda. Reer Galbeed asaga warkiiba ha sheegin oo waxayba gaartay in dagaalkii qaboobaa ee NATO iyo WARSO ay labaduba Soomaalida ka saftaan xiligii dagaalku dhex maray Somaaliya iyo Itoobiya, hadeerna intay garabka ina qaban lahaayeen oo naga caawin lahaayeen sidaan ciidan qaran u dhisan lahayn ayay ciidamo Afrikaan ah inagu soo xawileen, malaayiin doolarna ku bixiyaan.
Hadaba raja beelka muuqda waxaa looga bixi karaa, madaxda qaranka oo garwaaqsata awoodda madaxbanaanida qaranka Soomaaliyeed iyo inuusan jirin Carab iyo Cajab, Cadaan iyo Madow, Gaal iyo Islaam wax Soomaalida dhab ugu damqanaya oo aan ka ahayn Turkiga, isla markaana ayagoon cidna uga haybaysanayn talada dalka la aada hadba meesha ay ku jirto maslaxada dadka iyo dalka.